I-Aukey LC-C1, Qi ukuhlawulisa ngokukhawuleza kubo bonke abaphulaphuli [Ukunikezelwa] | Iindaba zeGajethi
Ukutshaja ngaphandle kwamacingo kuyinto engqongqo, ayifakwanga kuphela kuninzi premium kwintengiso, ngoku wonke umntu unokufikelela kwii-smartphones ezikwazi ukutshaja ifowuni yethu ngaphandle kokuyixhuma kwinethiwekhi, kwaye kukuba kwitafile yethu esecaleni kwebhedi, edesikeni okanye kwindawo yokusebenza (nkqu nasemotweni) kuluncedo ukukwazi ukuyilayisha ngaphandle kwamaqhina amaninzi.
I-Aukey iyazi kakuhle ukuba zeziphi iimfuno zabasebenzisi bayo, yiyo loo nto yenze uluhlu oluhle lweetshaja ezingenazingcingo ukuba zifumaneke kuwo wonke umntu. Ngeli xesha siza kuhlalutya i-Aukey LC-C1, itshaja engenazingcingo ye-Qi etshaja ngokukhawuleza engayi kuqatshelwa mntu. Hlala nathi kuphononongo lwanamhlanje ukuze ufunde ngakumbi ngayo.
1 Ukucaciswa kobuchwephesha kwitshaja kunye nemixholo yebhokisi
2 Izixhobo zetshaja ezingenazingcingo kunye noyilo
4 Thatha inxaxheba kwirafu
Ukucaciswa kobuchwephesha kwitshaja kunye nemixholo yebhokisi
Kubalulekile ukuba uzithathele ingqalelo ezi ntlobo zeempawu ukuze ungabinangxaki yokuhambelana, okokuqala ngenxa yokuba ukungangqinelani kunokuba kungagcwali, kule meko sifumana Itshaja enomgangatho weQi, oko kukuthi, iya kusebenza noninzi lwezixhobo ezixhasa ukutshaja ngaphandle kwamacingo.
Imilinganiselo: 14 x 9 x 4,5 cm
Iziphumo: 5V 1A
Igalelo: 5V 2A
Ityala lajaja engenazingcingo Kuquka iikhoyili ezi-3 onokuzihlawulisa ngesixhobo sakho ngokusibeka ngokuthe tye okanye ngokuthe nkqo, nangona kunjalo sithanda kakhulu, nangona ngokucacileyo isikhundla esibonelelwe uyilo sesona siphumelele kwaye sikhululekile, ukugcina isixhobo sethu sikhuselekile ngokukhuselekileyo ngaphandle kothuselo olukhulu.
Itshaja engenazingcingo iQi Aukey LC-C1
Uhlobo lwe-USB A kwikhebula le-microUSB
Isikhokelo sokuseta ngokukhawuleza
Ukongeza, sinokukhanya I-LED ebonisa ngokukhalipha ukusebenza kwesixhobo ngawo onke amaxesha, oko kukuthi, siya kwazi ukuba iyabiza okanye iyafumaneka ukuze ihlawuliswe. Ewe kunjalo, sifuna ukukhumbula ukuba ukufumana amandla okutshaja ngokukhawuleza kufuneka sisebenzise i-2A tshaja, kuba ayibandakanyi efanayo, into exhaphakileyo kwizixhobo ezifanayo ezikufutshane nala maxabiso, ukuze singayihoyi le nkcukacha. Naluphi na uhlobo lweshaja esisiseko nge-USB luya kuhambelana, kuba intambo ye-MicroUSB ehambelana nayo ikwabandakanyiwe kwiphakheji.
Izixhobo zetshaja ezingenazingcingo kunye noyilo
Kwinxalenye ehlawulisa esi sixhobo sifumana irabha emnyama, ayinamtsalane kwaye ayithandeki, inoyilo olusebenzayo kunye nezinto eziphathekayo, kwelinye lamacala siza kufumana izibuko lokutshaja elinalo kuphela, igalelo le-microUSB apho amandla afanelekileyo aya kufika ukuze sitsale ngaphandle kwefowuni. U-LOlona phawu luphambili kukuba ngokuba neekhoyili ezintathu siya kuba nakho ukutshaja ifowuni nokuba ingakanani na ngobungakanani bayoEwe, isiseko asikho ncinci ncam, sanele indlu ukusuka kwifowuni ye-intshi ezine (nangona iyinto ehlekisayo) kuyo nayiphi na ifowuni enkulu, inyani kukuba kweli candelo u-Aukey ukwazile ukwenza umsebenzi osebenzayo.
Kwelinye icala, sinenkxaso, into ebuntsimbi (ijongeka ngathi yialuminium) eya kusivumela ukuba sinike ipremiyamu, uAukey ukwazile ukuxhaphaza umba wokongeza izinto zentsimbi kwiimveliso zayo kakuhle, ivumele ukufikelela kubathengi bobuchwephesha obuphezulu abagqibe ukugcina iipeni ezimbalwa kwizinto ezithile. Kungasathethwa nto malunga nayo, iyahlangabezana nokulindelweyo kwaye ibonisa ukuba yakhiwe yomelele kwaye iyamelanaAyifanelanga ukuba ibangele nakuphi na ukuphoxeka kuthathelwa ingqalelo ixabiso.
I-Aukey LC-C1, Qi ukutshaja ngokukhawuleza kubo bonke abaphulaphuli
Enye yeeshaja ezingabizi kakhulu ezingenazingcingo ezinezi mpawu kunye nezinto ezisemarikeni, Kananjalo ukuba ucinga ukuba i-Aukey, ngaphandle kokuba iyifemu yaseTshayina eyaziwayo, ngokubanzi yenza umsebenzi olungileyo kunye neemveliso zayo. Ngamafutshane, nge- € 19,99 ebiza ngoku kwi Akukho mveliso ifunyenweyo Asinakufumana iingxaki ezininzi kwiAmazon. Ukuba ufuna ukuzama ukutshaja ngaphandle kwamacingo, lukhetho olulungileyo, ngaphandle koku, iikhoyili zaso ezintathu zinokuyifudumeza ifowuni ngandlela thile.
Thatha inxaxheba kwirafu
NgolwesiHlanu olandelayo ngo-10: 00 nje ukuba idraw iphele, siza kuqala ngomnye ovela kwisandla sika @AukeyES.
Itshaja ye-LC-C1 engenazingcingo, iQi ekhawulezayo.
Qalisa ukuqala: 01/12/2017 (11:00)
Olunye ulwazi luza kungekudala pic.twitter.com/QhgUwenkzP
Iindaba zeGadget (@agadget) Novemba 28, 2017
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » I-Aukey LC-C1, Qi ukuhlawulisa ngokukhawuleza kubo bonke abaphulaphuli [Banike]
Umyili weVideogame: ubugcisa obunekamva elihle
Khuphela umculo kwiSpotify